Mayelana NATHI - Wistron Industrial Limited
I-Wistron Industrial Limited
Inkampani ephelele ehlanganisa imboni kanye nezohwebo
I-Beijing Wistron Technology Ltd. yasungulwa ngo-2012 iyinkampani ephelele yokuhlanganisa imboni kanye nezohwebo. Kungumsebenzi ophelele ogxile ocwaningweni nasekuthuthukisweni, ekukhiqizweni nasekuthengisweni kwezinsizakusebenza zemikhiqizo yezokuphepha emgwaqeni ngeSolar nemishini ehambisanayo ejwayelekile yomgwaqo. Njengamanje, inkampani inamalungelo obunikazi bomkhiqizo, ngohlelo oluphelele nolwesayensi lwe-ISO9001, imikhiqizo isidlulile i-CE, i-ROHS, i-FCC, i-IP68 nezinye izitifiketi, futhi ngokuhambisana namazinga we-European and American ASTM D4280 kanye ne-EN1463-1 .
Le nkampani inomkhiqizo we-R & D womkhiqizo onamandla, futhi i-40% yenzuzo yaminyaka yonke izosetshenziselwa i-R & D yezobuchwepheshe Futhi ifakwe ukulungiswa kwamaphutha nokuhlanganiswa kohlelo lomhlangano wokukhiqiza ongenaluthuli ongamamitha ayi-1000. Inesistimu yokuphatha emihle eqinile nephelele ezingxenyeni ezithile, ekukhiqizweni nasekulawulweni kwekhwalithi, enikeza isiqinisekiso esinokwethenjelwa ngomjikelezo wokulethwa, ukulawulwa kwekhwalithi nezinga eliphakeme lokuphasa.
Ikhwalithi, ubuqotho, ukuphepha nokonga ugesi iKhasimende kuqala
Sizibophezele kakhulu embonini, sigcina ukushaya ngamandla kwemboni, futhi sinamathela ekuqondisweni "kwekhwalithi yekhwalithi, ubuqotho, ukuphepha nokonga ugesi kuqala". Namathela kucebo lomkhiqizo i-R & D, ukukhiqiza nokuthengisa. Kuze kube Manje, imikhiqizo ithunyelwe emazweni aseningizimu-mpumalanga ye-Asia, eYurophu naseMelika, eMpumalanga Ephakathi nase-Australia, e-Afrika, eNingizimu Melika nakwamanye amazwe amakhulu nezifunda. Isiqinisekiso esingcono sokuphepha komgwaqo wendawo
Ubuqotho, Ukuzinikezela, Ukudidiyela, Ukuqamba
I-Wistron ithwala umoya wobumbano we-Sincerity, Dedication, Coordination, Innovation engqondweni ngaso sonke isikhathi futhi izolwela ukwanelisa amakhasimende we-Solar power road futhi ithole amasheya amaningi emakethe futhi inciphise ukusetshenziswa kwamandla komhlaba ezinsukwini ezizayo. Inhloso yethu ukwakha ubudlelwane bebhizinisi obude nobuzuzisayo nabantu emhlabeni wonke, sizokuthokozela ukuxhumana kwakho, ngiyabonga kakhulu!